Isidlo sasekuseni: Thola Abathonya, Imikhankaso Yokwakha, kanye Nemiphumela Yokukala | Martech Zone
I-Publicfast: Thola Abathonya, Imikhankaso Yokwakha, kanye Nemiphumela Yokulinganisa
NgoLwesine, Januwari 7, 2021 NgoMsombuluko, Januwari 18, 2021 Douglas Karr
Ifemu yami isebenza nomkhiqizi njengamanje obheke ukwenza umkhiqizo, ukwakha isayithi labo le-ecommerce, nokumaketha imikhiqizo yabo kubathengi ngokulethwa ekhaya. Ubuchwepheshe ebesibusebenzise esikhathini esedlule futhi into eyodwa ebaluleke kakhulu ekwandiseni ukufinyelela kwabo bekuwukukhomba abantu abanomthelela omncane, abathonya ababhekiswe ezindaweni, kanye nabashukumisi bezimboni ukusiza ukwakha ukuqwashisa nokuqhuba ukutholwa.
Ukumaketha kwe-Influencer kuyaqhubeka nokukhula, kepha imiphumela iqondaniswa ngqo nokuthi umthelela wakho uhlobene kangakanani nemakethe eqondiwe ozama ukuyifinyelela. Abashushisi ababanzi, njengosaziwayo, bangabiza kakhulu ngezinga lokucabanga okuphezulu, kepha ngokuvamile banesilinganiso esincane sokuphendula. Noma kunjalo izinga eliphansi lokubonisa elinomthelela omncane, bavamise ukuthola amazinga okuphendula aphezulu yize bengenakho okulandelayo okuningi.
Imikhiqizo enesifiso sokusebenzisa ukumaketha kwabathonya imvamisa iba nobunzima bokukhomba abathonya. Ucwaningo oludingekayo lukhathaza kakhulu futhi alulula njengokufuna ukubalwa okuphezulu komlandeli. Kukuqonda niche abanegunya kukho, ukuthembana abanakho nabalandeli babo, kanye nokusebenzisana okuthunyelwe kwabo nezithameli zabo.
Nayi i-rundown enhle yokuthi unganquma kanjani ukuthi yibaphi abathonya abazosebenza nabo kusuka I-Mediakix.
Ipulatifomu Lokumaketha Elinomthelela Omphakathi
AmaBrands manje anethuluzi lokuwasiza ukuthi athole abathonya, athuthukise imikhankaso yokubambisana nawo, asethe okulindelwe, futhi alinganise imiphumela. Akukona nje kuphela ukuthi imikhiqizo ingasesha abathonya futhi ibamemele emikhankasweni, ingashicilela isikhashana somkhankaso abaphenduli abangaphendula kuso. Ukudla komphakathi iyinkundla yokuthengisa enethonya elinika amandla abathengisi:
Thola abathonya - Misa ukuqagela bese wenza ukumaketha kwakho okunethonya kubhekeke njengokusebenzisa izikhangiso ze-Facebook. Hlola izindleko ngokuchofoza ngakunye, i-CPM, inani lokuvelayo namanye amamethrikhi angathuthukisa isu lakho futhi alethe i-ROI ehamba phambili.
Yakha imikhankaso engalindeleka - Imikhiqizo ingabhala kafushane, kufaka phakathi imininingwane yomkhiqizo, ukubekwa abakufunayo, nezinhloso zomkhankaso. Ukudla komphakathi bese isebenzisa ubuchule bayo ukubikezela imiphumela ngokuya ngemigomo. Abathonya bangahambisa okuqukethwe, bathole ukulandelwa komkhankaso, futhi womabili amaqembu angavuma imikhankaso futhi avumelane ngesinxephezelo.
Khokhela umkhankaso noma ukusebenza - Ukudla komphakathi inikeza umthelela wakho ngezixhumanisi zomuntu siqu ukulandelela izenzo zomkhankaso wakho ukuze umkhiqizo ukwazi ukuqapha ukusebenza kwakho noma ukukhokhele ngokususelwa esenzweni.
Ukudla komphakathi isiza amakhulu ezinkulungwane zabathonya ukutholakala futhi basebenzisane nemikhiqizo engaphezu kuka-1000 + kuwo wonke amakhulukhulu wemikhankaso yokuthengisa enomthelela emhlabeni jikelele.
Zama i-Publicfast Mahhala
Ukudalulwa: Ngixhumene ne Ukudla komphakathi kanye ne-Influencer efakwe ohlwini.
Tags: thola abathonyaUngabathola kanjani abathonyaUngabakhetha kanjani abathonyaukumaketha kwamathonyaipulatifomu yokuthengisa enomthelelaukubikezela imikhankaso yokuthonyabhekumuzi
Ungasithatha Kanjani Isikrini Sewebhusayithi Ngobukhulu Obucacisiwe Usebenzisa iGoogle Chrome